Nofon-tany | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny fomba hananana dalya isan-taona amin'ny trano fatoriana fahavaratra
Dahlia - ilay mpanjakavavin'ny voninkazo amin'ny lohataona. Mitohy maniry hatramin'ny fararano amin'ny fararano izy, rehefa misy voninkazo hafa simba. Ankoatra izany, tsy sarotra ny mikarakara ny dahlia. Androany, maro ny mpamboly, miaraka amin'ny isan-taona, dia nanomboka nanamboatra dahlia isan-taona, mitombo sy mitandro izany izay tsy miteraka olana maro.
Karazana perlite sy vermiculite: fitoviana sy fahasamihafana
Anisan'ireo mpangotraka maoderina maro, ny perlite sy ny vermiculite dia tsy any amin'ny toeram-pambolena an-trano. Vao tsy ela izay, vitsy no nahalala ny mety ho fampiasana ireo fitaovana ireo ho an'ireny tanjona ireny, fa amin'izao fotoana izao dia afaka mividy azy ireo any amin'ny fivarotana voninkazo. Na dia mitovy be aza ny perlite sy ny vermiculite ho an'ny zavamaniry dia mbola eo ihany ny fahasamihafana, ary ankehitriny dia ho hitantsika hoe iza.
Ahoana ny fampiharana ny vermiculite ho an'ny fambolena
Ny fampandrosoana ara-dalàna ny fambolena dia miankina amin'ny kalitaon'ny tany. Rehefa mandeha ny fotoana dia miharatsy ny fananan 'ny tany - mihena ny rano sy ny rivotra azo tsinontsinoavina, mampihena izany, mampiadana. Tsy ampy ny rivotra sy ny rano. Mihinana sakafo mahavelona, ​​mihena ny fahavokarana. Etsy an-danin'izany, matetika ny fihoaram-peon'ny tany dia mitranga matetika, rehefa misy fanafody miaraka amin'ireo vongan-dranomamy mineraly dia mety hitranga izany.
Ny tsara kokoa - ny urea na ny nitrate ammonium, ary raha io no iray sy ny toy izany
Ireo izay mamboly legioma na fambolena ao amin'ny tavoahanginy dia mahatakatra fa sarotra be ny maniry vokatra malaza tsy misy alika azota. Ny rivotra no tena zava-dehibe indrindra ho an'ny voankazo rehetra, ilaina amin'ny fampivoarana haingana ny zana-ketsa amin'ny lohataona, ary koa ny fampitomboana ny volombava mavomavo.
Ammonium nitrate: ahoana no fomba ampiharana tsara ny diloilo
Tsy ny olon-drehetra no mahalala ny ammonium nitrate, ka andao hijery akaiky kokoa an'io entona io, ary jereo koa ny fomba sy ny toerana ampiasaina. Ny nitromea ammonium dia akanjo amam-bozaka maitso manerantany miaraka amin'ny loko matevina, mavo na mavo ary mavo, miaraka amin'ny diametre ka hatramin'ny efatra milimetatra. Ny fitrandrahana ammonium nitrate sy ny firafitry ny fanafody Entona antsoina hoe "nitromea ammonium" - safidy iraisana mahazatra eo amin'ireo mponina amin'ny fahavaratra, izay nahitana fampiharana be dia be noho ny fisiana tao amin'ny firafetany manodidina ny 35% nitroka, izay tena ilaina tokoa amin'ny fivoaran'ny zavamaniry.
Inona no atao hoe hydrogel sy ny fomba fampiharana izany
Aorian'ny fiverenana lavitr'ezaka lavitr'ezaka dia maro ireo mpamboly no mahatsiravina amin'ny toetry ny toeram-pamboleny indostrialy, izay, raha tsy misy ny firaka, dia mivadika ho herbarium. Mba hisorohana izany, ny zavamaniry mitombo ao anaty hydrogel ihany no hanampy, izay horesahantsika etsy ambany. Hydrogel: inona izany Inona ny hydrogel, fa tsy ny rehetra no mahalala, na dia tao anatin'ny taona vitsy lasa aza dia lasa zarazaraina kokoa teo amin'ny zaridaina izany.
Bibikely ao anaty zaridainantsika: toetra mahasoa, fambolena
Ny anjara asan'ny kankana amin'ny tany sy ny fiainan'ny olombelona dia sarotra ny mandiso fanantenana. Ny tanimbolin'ny lolo marefo dia mpandray anjara tsy azo ivalozana amin'ny famoronana tany lonaka, ary noho izany ny famoronana sakafo dia ny fiveloman'ny olombelona. Na dia tsy mieritreritra izany matetika aza izahay fa tsy misy kankana an-kibo dia mety ho sarotra ny fisiantsika.
Ireo endri-javatra amin'ny fampiasana tavoahangy tahaka ny fehiloha
Mihamaro ny mpamboly maniry hampiasa menaka voajanahary ho sakafom-biby. Anisan'izy ireo ny tavoahangy. Fantaro anefa fa tsy mety amin'ny tany rehetra izany. Eny, ary ampiharina io hafetsena io dia tsy maintsy hendry, mba tsy hanimba ny zavamaniry na ny tany. Momba ny inona ny tavoahangy, ahoana ny mitranga sy ny fomba ampiharana tsara azy amin'ny endriky ny fanafody amin'ny tavy, vakio ao amin'ny fizarana manaraka.
Ahoana ny fampiharana "Azofosku" ao amin'ny dacha
Androany ny iray amin'ireo be mponina indrindra sy malaza amin'ny fambolena dia ny zava-mahadomelina "Azofoska". Io fanangonam-biloogera voalanjalanja io dia efa nampiasaina tamin'ny fambolena indostrialy lehibe, ary azo ampiharina koa izany amin'ny toeram-pivarotana madinika, kianja kely. "Azofoska" - inona io?
Ny fomba fampiharana ny pèllite amin'ny zavamaniry
Ny tena olana matetika amin'ny zaridaina dia tany be loatra, izay tsy mamela ny rivotra sy ny fahamendrehana, mba hisorohana ny zavamaniry tsy hitombo. Ny Agroperlite dia ho famonjena marina tokoa amin'ny tranga toy izany, ireo toetra sy fampiharana izay horesahantsika etsy ambany. Inona ny perlite sy ny endriny Perlite dia miely any amin'ny fambolena fambolen-kazo sy ny zaridaina, mba hahafantaran'ny olona rehetra ny zavatra.
Karazana mineraly mineraly, anarana sy famaritana
Ny tsiranoka avy amin'ny mineraly dia misy karazan-tsakafo be dia be. Ny firafitry ny mineraly mineraly dia mety samy hafa, ary miankina amin'ny filana sy ny tsotra ny fandefasana sakafo. Zava-dehibe izany! Ny fanafody dia tokony hampiasaina amin'ny fetra kely, amin'ny fijerena ny haavon'ny sakafo ao anaty tany.
Rafitra fanafody ho an'ny tany samihafa: fampiharana sy dosage
Ny famoahana ny tany dia dingana manan-danja amin'ny fivoarana sy ny fampiroboroboana ny zavamaniry ary araka izany, mba hahazoana vokatra lehibe sy avo lenta. Ny fanafody - setrin'ny akora ampiasaina hanatsarana ny toe-javatra sy ny fananana tany. Mamelona ireo zavamaniry miaraka amin'ny singa simika ilaina izy ireo. Misy ireto karazan-jiro ireto: organika sy mineraly (amin'ny fiaviana); solid sy liquid (toeram-piompiana); hetsika mivantana ary indirect (fomba fihetsika); fototra, famafazana famafazana, famatsiana, ambaratonga, tontonana (fomba fampidirana).
Ny latabatra sy ny maha-zava-dehibe ny fihenan'ny tany ho an'ny fambolena zaridaina sy zaridaina
Inona no toetry ny tany ao amin'ny saha misy azy, fa tsy ny tompon-tany rehetra no mahalala. Maro no very eo imason'ny aloka tsy azo antoka ny pH sy ny soatoavina navoakany aorian'izany eo amin'ny fonosana fivarotana fivarotana. Na dia marina aza izy io dia ny fampahalalana manan-danja indrindra amin'ny fametrahana ny famafazana sy ny fandrosoana amin'ny hoavy.
Inona ny karazana tany?
Ho an'ny mpamboly sy ny mpiompy, ny tena manan-danja indrindra dia ny kalitaon'ny tany ao amin'ny teti-dratsiny. Ny karazana tany samihafa dia miavaka amin'ny toetra toy izany: rafitra; ny fahafahana mandalo rivotra; hygroscopic; hafanana hafanana; hakitroky; asidra; sata misy singa mikiroa sy macro, organika. Ny fampiharana ny fahalalana ny zaridaina momba ny karazan-tany sy ny toetrany dia hamela anao hisafidy ny fambolena marina ho an'ny fambolena ao amin'ny zaridaina, haka ny entona ary handamina tsara ny fizotran'ny fambolena.
Ahoana ny fandroahana ny tany alohan'ny fambolena zana-ketsa
Tranokin-tsokajin-dabozia - antoka ho an'ny zana-kazo matanjaka sy salama. Noho izany, ny teboka voalohany fanomanana amin'ny famafazana voa. Ny fanitsiana dia azo atao amin'ny fomba fanao amin'ny olona na mampihatra ny fanafody simika na biolojika. Mba hahalalanao hoe iza no teknolojia mety ho an'ny tranokalanao, hevero ny fomba mahazatra, ambany ary mahomby.
Mampiasa agroperlite ho an'ny fambolena fambolena isika
Ny fambolena sy ny fikarakarana fambolena dia mora mora amin'ny tany mainty lonaka, ary ny parlite dia hanampy ireo izay manana ny mahantra, raha ny marina dia tsy mety ny vokatra vokatra. Io no votoatiny izay manampy amin'ny fampivoarana ny sakafo sy ny fahamendrehana amin'ny tanimanga sy vatomamy sandandy: rehefa avy nampidirina izy ireo, dia tsy mitovy amin'ny fitambaran'ny simika sy ny rafitra marevaka.
Ny fampiasana fitaovana fandrakofam-pirazanana napetraka ao amin'ny zaridaina
Androany, maro ireo zaridaina mampiasa fitaovana fikarakarana isan-karazany eo amin'ny efitranony. Saingy vitsy no mahalala momba ny trano fialofana toy ny spunbond, ary mihoatra noho izany aza, vitsy ny olona hilaza izay tokony hatao ary hiantso ny faritra misy ny fampiharana azy. Mandritra izany fotoana izany, ny fotoana dia tsy mitsahatra ary ny mpanamboatra dia manatsara hatrany ny kalitaon'ny vokatra, manitatra ny fahafahana mampiasa azy.
Ahoana ny famoahana ny tany: toro-hevitra ho an'ny mpamboly novaina
Ny mpamboly tsirairay, maniry eny amin'ny toeram-pambolena iray, fa ny hazo madinika, ny hazo na ny voankazo dia tokony handinika ny toetry ny tany. Koa satria ny vary samihafa dia mety hitovy tanteraka amin'ny faritra iray, miankina amin'izany tsy miankina fotsiny amin'ny fahavokarana ny tany fa miankina ihany koa amin'ny asidra. Ny haavon'ny asidra avo dia miantraika amin'ny fihenan'ny varimbazaha samihafa ary manondraka ny fakan'ny zavamaniry, izay manimba ny fivoaran'ny voankazo maromaro.
Ahoana ny fandanianao ny tany amin'ny alalan'ny traktera (video)
Ny motoblock na mini-tractor dia mety ho lasa mpanampy tsy azo ianteherana amin'ny mpamboly madinika ao amin'ny taniny. Tsy mitaky solika be izy io, mitaky toerana kely, mora ampiasaina, ary mametraka asa manan-danja maro, iray amin'ireo dia mitaky ny tany. Mini, miditra na mavesatra? Mba hahazoana vokatra amin'ny plough (tiller) mba hahomby, dia ilaina ny misafidy ny fitaovana mety.
Ahoana no ahafahana mamaritra tsy miankina ny asan'ny tany ao amin'ilay tranokala
Alohan'ny fambolena hazo na hazo dia ilaina ny mandalina hoe iza no ho tsara indrindra ho azy ireo. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia hamaritra ny fomba hamaritana ny asidin'ny tany tsy miankina, satria io no marika izay misy fiantraikany goavana eo amin'ny fampandrosoana ny vokatra. Karazana asidia Ny asidrain'ny tany dia iray amin'ireo fampahalalana manan-danja amin'ny fandalinana ny tany.
Inona ny fambolena ny tany: ahoana no fomba hambolena ny tany
Ny fikojakojana ny zaridaina na trano fialofana dia mifandray amin'ny karazana teknolojia maro samihafa. Ny sasany amin'izy ireo dia ampiasaina amin'ny "fomba fanao", raha ny fomba mahomby kokoa dia mifandray amin'ny fampiasana fitaovana manokana. Any amin'ny faritra midadasika, fomba fanao iraisam-pirenena no ampiasaina izay mandrakitra zavatra maro momba ny tany indray mandeha.
Trano mahafinaritra ho an'ny zana-katsaka - Fazenda greenhouse
Ny fanosehana arintany eo amin'ny oven ao an-tokantrano dia azo antoka fa hitazona ny toetra mahasoa ny voankazo
Sakafo maotina sy mora ho an'ny fanangonam-bolo ao anaty tsiro
Fitomboan'ny voaloboka ao anaty trano fonenana: maninona no tsy voankazo? Zava-tsarobidin'ny rano sy ny teknolojia mamelona
Miangona ao an-trano i Coleus
Dingana algorithm ho an'ny mamboly pepfera: fambolena sy fikarakarana zana-ketsa, fanangonana tsotsotra, famoretana, famenoana sy famolahana amin'ny tany malalaka
Nahoana isika no tia divay voaloto ary mety tsara amin'ny divay?
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Nofon-tany